Ngaba amaBuddha asho ukuthini "ukhanyiso"?
Uninzi lwabantu luvile ukuba uBuddha wayekhanyisiwe kwaye amaBuddha afuna ukukhanyiselwa . Kodwa oko kuthetha ukuthini, ngokuthe ngqo?
Ukuqala, kubalulekile ukuqonda ukuba "ukukhanya" igama lesiNgesi elithetha izinto ezininzi. Ngokomzekelo, eNtshona, i-Age of Enlightenment yintlangano yefilosofi yeenkulungwane ze-17 neye-18 ezakhuthaza inzululwazi kwaye ziqiqa ngeenkolelo kunye nenkolelo-ze.
Kwintshona yeenkcubeko, ngoko, igama elithi "ukukhanya" lidla ngokudibanisa nokuqonda kunye nolwazi. Kodwa ukukhanya kweBuddhist yinto enye.
Ukukhanyiswa kunye noSatori
Ukongeza kwidideko, igama elithi "ukukhanya" lisetyenziswe njengenguqu yamagama amaninzi ase-Asia angathethi ngokuthe ngqo into efanayo. Ngokomzekelo, izihlandlo eziliqela ezidlulileyo zeNgesi zithethwa kwi-Buddhism ngokubhalwa kwe-DT Suzuki (1870-1966), isazi saseJapan esiye sahlala ixesha njenge- Rinzai Zen monk. Suzuki wasebenzisa "ukukhanyiselwa" ukuguqulela igama lesiJapane elithi satori , elivela kwisenzi satoru , "ukwazi." Olu gu qulelo lwungekho ngaphandle kokulungiswa.
Kodwa ekusebenziseni, u-satori udla ngokubhekiselele kumava okuqonda kwimeko yokwenene. Kuthelekiswa namava okuvula umnyango, kodwa ukuvula umnyango kusasaza ukuhlukana kwinto engaphakathi kwendlu. Ngokwakhe ngempembelelo ka-Suzuki, imbono yokukhanyiselwa kokomoya njengamava ngokukhawuleza, okonwabileyo, okuguquguqukayo waba yinxalenye yenkcubeko yasentshona.
Nangona kunjalo, le ngcamango ephosakeleyo.
Nangona i-DT Suzuki kunye nabanye ootitshala be-Zen baseWest bachazela ukukhanyiswa njengamava anokuba nawo ngexesha, ootitshala abaninzi beZen kunye neeteksi ze Zen baya kukuxelela ukuba ukukhanya akulona amava kodwa uhlala unaphakade - uhamba umnyango ngonaphakade.
Akukho satori ukukhanya ngokwalo. Kule ndlela, iZen ihambelaniswe nendlela ukukhanyiselwa kubonwa ngayo kwamanye amasebe eBuddhism.
Ukukhanyiswa kunye neBodhi (Theravada)
UBodhi ligama lesiSanskrit nelingu Pali elichaza "ukuvuswa," kwaye kaninzi iguqulelwe ngokuthi "ukhanyiso."
Kwi- Theravada UbuBuddha , i-bodhi ihambelana nokugqibelela kwengqiqo kwiiNqobo ezine eziQinisekayo, eziza kupheliswa kwe- dukkha (ukubandezeleka, uxinzelelo, ukunganeliseki). Umntu ofezekisile le ngqiqo kwaye washiya zonke izinto ezingcolileyo, ukhululiwe kumjikelezo we- samsara . Xa esaphila, ungena kwi- nirvana enemeko ethile , kwaye ekufeni uyanandipha uxolo lwe-nirvana epheleleyo kwaye ubalekele kumjikelezo wokuzalwa kwakhona.
Kwi-Attinukhopariyaayo Sutta ye- Pali Tipitaka (Samyutta Nikaya 35.152), uBuddha wathi,
"Ngoko ke, iidonki, oku kungukuthi umonakalo, ngaphandle kokholo, ngaphandle kokukholelwa, ngaphandle kokuthambekela, ngaphandle kokucingela, ngaphandle kokunandipha kwiimbono kunye neengcamango, kunokuqinisekisa ukufumana ukukhanya: 'Ukuzalwa kubhujiswa, Ubomi obungcwele bufeziwe, kwakufuneka kwenziwe ntoni, akukho nto ihlala kuyo kweli hlabathi. '"
Ukukhanyiswa kunye neBodhi (Mahayana)
E- Mahayana Buddhism , i-bodhi ihambelana nokuphelela kobulumko , okanye i- sunyata . Yiyo imfundiso yokuba zonke izinto ezintle zingenalutho.
Kutheni oku kubalulekile? Uninzi lwethu lubona izinto kunye nezidalwa ezizungezile njengoko zihlukile kwaye zihlala zisigxina. Kodwa le ngcamango ibonakala. Kunoko, ihlabathi elimangalisayo liyingxaki ehlala iguqukayo yezizathu kunye neemeko (jonga kwakhona i- Dependent Origination ). Izinto kunye nezidalwa, ezingenanto yokwenene, azikho okwenene okanye azikhoyo (jonga kwakhona " Iinyaniso ezimbini "). Ukubona ngokupheleleyo i-sunyata idibanisa izibopho zokuzibophezela ezibangela ukuba singonwabi. Indlela emibini yokwahlula phakathi kokuzimela kunye nezinye zinika indlela yokujonga ngokusisigxina okungagqibekanga apho zonke izinto zihlobene.
E-Mahayana Buddhism, into efanelekileyo yokusebenza yile ye- bodhisattva , umntu okhanyisiweyo ohlala kwihlabathi elimangalisayo ukuzisa zonke izinto ukuba zikhanyise.
Inqobo ye-bodhisattva ingaphezu kwe-altruism; ibonakalisa into yokuba akukho namnye wethu ohlukeneyo. "Ukukhanyiselwa komntu ngamnye" i-oxymoron.
Njengoko isebe laseMahayana Buddhist, izikolo zesiTantric zeVajrayana Buddhism zikholelwa ukuba ukukhanya kungafika konke kanye ngexesha eliguqukayo. Oku kuhamba kunye neenkolelo e-Vajrayana ukuba ukuthanda izinto ezahlukeneyo kunye neziphazamiso zobomi, kunokuba ibe yimingcipheko yokunqoba, ingaba ngumbane wenguqu ekukhanyeni okunokuthi kwenzeke ngomzuzwana omnye, okanye ubuncinci kule minyaka . Okubalulekileyo kulo mkhuba kukukholelwa kwiBuddha yeNdalo - ukufezekiswa kwangasese kwezinto zethu zangaphakathi ezilindele ukuba siyiqonde. Le nkolelo ekukwazi ukufikelela ekukhanyeni kwangoko ayifani nento yeSartori, nangona kunjalo. KwaBajrayana Buddhist, ukukhanyiswa akusiyo imbonakalo emnyango. Ukhanyiso, oluye lwalufezekileyo, lukarhulumente osisigxina.
Ukukhanyiswa kunye noBuddha Nature
Ngokomxholo, xa uBuddha efumanisa ukukhanya wathi into ethile engayiphumeliyo "Ngaba akuyinto ephawulekayo! Zonke izinto sele zikhanyisiwe!" Leli "likhanyise" imeko yinto eyaziwa ngokuthi yiBuddha Nature , eyakha inxalenye ebalulekileyo yeBuddhist practice kwezinye izikolo. KwiMahayana Buddhism, uBuddha Nature yiBuddha yobuntu bonke abantu. Ngenxa yokuba zonke izinto sele ziBuddha, umsebenzi awuzukufumana ukukhanya kodwa ukuwuqonda.
Inkosi yaseTshayina uHuineng (638-713), uMphathiswa weZithandathu weChin ( iZen ), wafanisa uBuddha kwinyanga efihlwe ngamafu.
Amafu amele ukungazi kunye nezinto ezingcolileyo. Xa ezi zidibeneyo, inyanga, ekhoyo, ibonakalisiwe.
Kuthiwani ngala mava adibanayo, avuyo, aguqukayo? Mhlawumbi uye wafumana ezi zihlandlo kwaye waziva unento ethile yokomoya. Amava anjalo, ngelixa lihle kwaye ngamanye amaxesha lihamba kunye nokuqonda okwenene, akunjalo, ngokwalo, ukukhanya. Kuba abaninzi abasebenzi, amava ovuyo ngokomoya awazange asebenze ekusebenzeni kweNdlela yesibhozo ayinakuguqulwa. Enyanisweni, siyalumkisa malunga nokudibanisa le mizuzu yoxolo kunye nesimo sokukhanya. Ukutshatyalaliswa kwezizwe ezilungileyo kungenza ibe yintlobo yesifiso kunye nokuqhotyoshelweyo, kwaye indlela eya ekukhanyiseni ukuzinikela nokunamathela ngokupheleleyo.
Utitshala weZen uBarry Magid uthe ngoMphathi Hakuin ,
I-post-satori practice yeHakuin yathetha ekugqibeleni ukuyeka ukuxakeka imeko yakhe kunye nokufikelela kunye nokuzinikela kwakhe kunye nokusebenza kwakhe ekuncedeni nasekufundiseni abanye. Ekugqibeleni, ekugqibeleni, ekugqibeleni, waqaphela ukuba ukukhanya okwenyaniso yinto engapheliyo kunye nemfesane esebenzayo, kungekhona into eyenzeka kanye kunye nabo bonke ngomzuzwana omnye kumkhonto. " [ Akukho nto ifihlakeleyo (Ubulumko, 2013).]
UShunryu Suzuki (1904-1971) wathi ngokukhanyiselwa,
"Kuyinto engummangaliso onokuthi abantu abangenakho amava okukhanya, ukukhanyiselwa kuyinto engummangaliso." Kodwa ukuba bayifumana, ayilutho. Akukho nto ekhethekileyo, oko ke, ukuba uqhubeka lo mkhuba, uya kuthi ufumane into engakumbi - akukho nto ekhethekileyo, kodwa nangona kunjalo.Uthi "uhlobo lwendalo yonke" okanye "uBuddha imvelo" okanye "ukukhanya." ungabiza ngamagama amaninzi, kodwa kumntu onayo, ayikho nto, kwaye yinto. "
Ubomi bobabini kunye nobomi bobubomi bobubungqina bokuba babonisa ukuba abaqeqeshi abanezakhono kunye nezilwanyana ezikhanyisiweyo banokukwazi ukukwazi ukwenza izinto eziqhelekileyo, nokuba namandla angaphezu kwamandla. Nangona kunjalo, ezi zakhono azikho ngokwabo ubungqina bokukhanyiselwa, kwaye akukho ndlela ebalulekileyo kuyo. Napha, nathi, siyalumkisa ukuba singaxoshe ezo zakhono zengqondo emngciphekweni wokuphosa umunwe ukukhomba kwenyanga kwenyanga.
Ukuba uyazibuza ukuba uye wakhanyiswa, ngokuqinisekileyo awukho. Indlela yodwa yokuvavanya ingqiqo yomntu ukuyihambisa kumfundisi utitshala. Futhi ungakhathazeki ukuba impumelelo yakho iyahlukana phantsi kokuhlolisiswa kootitshala. Ukuqala kwamanga kunye neempazamo ziyinxalenye ebalulekileyo yendlela, kwaye ukuba kwaye xa ufikelele ekukhanyeni, kuya kwakha phezu kwesiseko esiqinileyo kwaye awuyi kuba nephutha ngayo.
Iingcaphuno ezivela kwiPrince Diana
Biography kaFranz Kline
Iikharathi zeNtsana kunye neKlorine
I-Treehouse Kids 'Adventure Centre
'Stride la Vampa' Iingoma kunye nesiNgesi ngokuguqulelwa kwimixholo
Ukwahlukana Phakathi koPhulo lokuPhatha kunye neReiki